トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Wina Indlela Hanemono-Dejihane (concepts esisiseko)
pa yakutshanje, ekubeni umatshini Seven sele isifundo, ndicinga ukuba ukungena kwanabo musa ukwazi oko kuthiwa Hanemono. Abanye abantu abakwaziyo, Hanemono ukuba intlawulo ngaphantsi, inokuba abanye abantu bacinga ukuba akukho nako ukuphumelela.
Kodwa ke, ukuba uyawazi inxaxheba ukuqinisekisa ukuze nabo liphumelele Hanemono, usenakho siphumelele uyaphuma.
Kuqala kwinto zonke, ize ke inkcazelo Hanemono. I Hanemono, xa ibhola lingena Ngenye shot kwindawo ethile, luya kuvula kwamaphiko into umlinganiswa ebusweni iziko webhodi. Ezinye into ubuntu,-umngxuma ezintathu evulekileyo, abe uqinisekise hit omkhulu xa ibhola wangena phakathi kwabo kuya kuba Hanemono.
kutshanje, kodwa Hanemono ukuba akukho kuphinda zibonakala lula, nokuba kukho into xa efana win indlela, ndifuna ukuba ndibone. Hanemono into kusenokwenzeka ukuba bachaphazeleka izikhonkwane luhlengahlengiswe kumatshini ngaphezu ezisixhenxe. Ukuba ucinga ukuwina
Hanemono, kukho imfuneko kukhangela uhlengahlengiso isikhonkwane. Xa Ndaya koko, Ukuba uhlengahlengiso isikhonkwane, kungenzeka ukufumana umatshini ngaphezu ezisixhenxe kunokuthiwa ukuba ibe ngaphezulu. Ngoku, siza kwazisa indawo isikhonkwane hlengiso ofuna ukubona ukuze baphumelele.
Kuqala kwinto zonke, na uhlengahlengiso zezikhonkwane endhawini isiqalo chucker ibalulekileyo. Kufutshane ekuqaleni ,: omabini amacala kukuthi, abo avulekileyo kuyinto Yebo kuluncedo. Oku bendalo ibali isikhonkwane elungileyo kummandla isiqalo chucker ivuliwe, kodwa omnye lowo, ukuba kanye njengokuba kubalulekile nje kufutshane ekuqaleni, le uhlengahlengiso kuzipho inxalenye hakama phezulu lezikhonkwane ekuqaleni.
le isikhonkwane, wakhangela phezulu, ekubeni kukho umsantsa phakathi ekuqaleni chucker, kuya kuba lula ukuba ziqulathe ibhola. Ukuba kukho uhlengahlengiso kuzipho iindawo ekuthiwa hakama, kukuba nangona kwimali uqale kancinane kakhulu, kusenokwenzeka ukuba ufake ekuqaleni. Ndicinga
ngaphantsi intlawulo entanyeni, ndibe abanye abantu kuzitya, kodwa xa kuthelekiswa umatshini Seven, eyenza kube lula ukuba ukubetha ngcono Hanemono. utyalo-mali Less Kwikomkhulu, ukudlala wokufaka kude, ngokuba intsalela uzinzile lula, kancinane imali kancinane ngaphezu bakholwe uza kunyuka.
capture yenziwe nezikhonkwane uhlengahlengiso, xa wayehleli ngendlela elungileyo nail uhlengahlengiso itafile, oko nje hits emva. Ukuba sibekwe ekuqaleni, ukuba izakubekwa hit ukuvula amaphiko, ngenxa yokuba ibhola ngaphandle unako kuphumelela, yaye oomatshini zisixhenxe yonke into kule program ilawulwa, ndicinga kumnandi kwaye ezahlukeneyo lungaba mnandi.
ngexesha elinye, isixa imali enkulu ayikwazi kulindeleke Mna, okoko nje umdlalo imini enye, ndicinga ukuba ndibazuze ngokucotha elide. Life of Hanemono i uhlengahlengiso isikhonkwane. Ukuba ndikhumbula kuphela, ixesha xha kancinane, ithi ngokulula uwine umzekelo kuthelekiswa umatshini Seven.
kutshanje, ukuze musa ukubona kakhulu, kukho kwiindawo ezinjalo, nesendlu pa aye waseka ezininzi, ezifana itafile kusetyenziswa. Kwanabo ubalekwe, ingongoma lokuphumelela, kuba kuphela hlengahlengiso iinzipho, zama ukudlala kanye ngeendlela zonke.